तनहुँ एक महिनादेखि प्रजिअविहीन - Purbeli News
तनहुँ एक महिनादेखि प्रजिअविहीन
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०३, २०७४ समय: ८:१४:१५
तनहुँ / तनहुँ जिल्ला एक महिनादेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीविहीन बनेको छ । तत्कालीन प्रजिअ रितेशकुमार शाक्य गत पुस २८ गते सरुवा भई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, काठमाडौँतर्फ लागेपछि तनहुँ जिल्ला प्रजिअविहीन भएको हो । प्रजिअविहीन हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हेरिने केही सार्वजनिक अपराध र हातहतियार खरखजाना, कालोबजारसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने कार्य प्रभावित हुँदै आएको बताइएको छ ।
यतिबेला निमित्त प्रजिअको भरमा जिल्ला प्रशासन कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ । सहायक प्रजिअ तुलसीराम पौडेलले निमित्तका रुपमा गर्ने सबै काम आफूले गरिरहेको बताउनुभयो । केही सार्वजनिक अपराध, हातहतियार तथा खरखजाना, कालोबजारसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्न भने समस्या परेको बताइएको छ ।
सेवाग्राहीका कुनै पनि काम नरोकिएको दाबी सहायक प्रजिअ पौडेलले गर्नुभयो । निमित्तले गर्न मिल्ने जति सबै काम आफूले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ प्रजिअका रुपमा कहाँबाट को आउने हो भन्नृ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रको कारोबार र राहतका कार्यक्रम नरोकिएको सहायक प्रजिअ पौडेलले बताउनुभयो ।
केही वर्षअघि प्रजिअ नहुँदा भूपू सैनिकको सिफारिश रोकिँदै आएको थियो । पछिल्ला वर्षमा पेन्सन क्याम्पसँग समन्वय गरी त्यस्ता सिफारिशहरु प्रजिअ नहुँदा निमित्त प्रजिअले समेत गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएकाले यसपटक त्यस्तो समस्या नरहेको दाबी सहायक प्रजिअ पौडेलको छ । तनहुँ जस्तो जिल्लालाई एक महिनादेखि प्रजिअविहीन बनाएर राख्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन भएको तनहुँवासी बताउँछन् ।
आजको राशिफल / २०७५ ज्येष्ठ ०८ गते मङ्गलबार
यी ३ राशिका पुरुष हुन्छन सबैभन्दा खराब पति, कतै तपाई पर्नु त भएन ?
नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा जे देखियो (१८ तस्विरहरू )
यस्तो छ वाम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ)
संविधान संशोधन छुट्टै विषय होः प्रम
चीनमा विषाक्त खानाका कारण एकै गाउँका ८७ जना विरामी
बाबुको मृत्यु र आमा पोइल् गएपछि दुई सन्तान भए बेसाहारा !
भारत सँग सीमाना जोडिएका १६ वटा पिलर गाएब (तस्विरहरू सहित)